ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ခဲ့သောဤအစီအစဉ်ကို download လုပ်ပါ။ | Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကသူတို့၏အထောက်အပံ့ပြnyနာများအတွက် PCAnywhere ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Vista ကိုအသုံးပြုနေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရ client ကိုကြိုးစားဖွင့်သောအခါ၊ သဟဇာတမဖြစ်သောမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်ချက်ချင်းဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး installer သည်နုတ်ထွက်လိုက်သည်။
Symantec site ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကလိုက်ဖက်တဲ့ပြissueနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းခဲ့တယ် အဆင့်မြှင့် ဗားရှင်း 12.1 ရန်။ snag? အဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးရမည် ကျွန်တော်မှာအဲဒီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးရတယ်။ လျှောက်လွှာတစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကန ဦး လိုင်စင်ကိုမပေးခင်အလုပ်လုပ်မှရပြီးသင်ဒေါသထွက်ဖို့လုံလောက်သည်။
ယခုတွင်ငါသည် 12.1 တင်ဆောင်သွားပါပြီ, ငါကနှင့်အတူပြproblemsနာများတန်ချိန်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ် Task Manager ကိုကြည့်ပါကဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်အလုပ်လုပ်နေပုံရသည်၊ သို့သော်ပြတင်းပေါက်မရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ ငါပြတင်းပေါက်ကိုတက်လာလျှင်၊ ငါပြantနာကို Symantec ဖိုရမ်များတွင်စလေ့လာခဲ့သည်။ ငါတွေ့ရှိခဲ့မှတ်စုတစ်ခုမှာကြီးစွာသောဆောင်းပါးဖြစ်သည် Symantec Autofix အစီအစဉ်။
မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့၏မူလပရိုဂရမ်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရေးသားသနည်း။ Symantec ကအဲဒီကုမ္ပဏီဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဟေး Symantec: အကယ်၍ ပြtheနာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းနှင့်၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသင်သိလျှင်၊ မူရင်း လျှောက်လွှာ !!!
Autofix ပရိုဂရမ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် PCAnywhere တွင်ပြသနာများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါ Symantec ပရိုဂရမ်တစ်ခုခုသုံးရတဲ့အခါ cringe ရပါတယ်... ငါသူတို့အကြောင်းကြာမြင့်စွာရေးသားခဲ့သည်။
Tags: ကတ်များiphone plugin ကိုအိုင်ဖုန်းဆောင်ပုဒ်Jramerမိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပြင်ပကြော်ငြာwordpress အက်မင်
မေလ 10, 2008 မှာ 8: 59 AM
Windows Vista … Microsoft အတွက်အဆုံးရဲ့အစလား။
သြဂုတ် 22, 2008 မှာ 5: 58 AM
- sessioncontroller.exe ကိုဖွင့်ပါ။ ၎င်းကိုပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းလမ်းညွှန်တွင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။
- pcAnywhere (winaw32.exe) ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊
မျက်နှာပြင်အလွတ်သည် sessioncontroller.exe စတင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင် pcanywhere ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို ၁၂.၅ တွင်ပြင်ဆင်ထားပြီးလက်ရှိ Beta ၌ရှိသည် http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
22:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 05
ကောင်းပါပြီ။ .5 update တိုင်း (နှင့် .1 updates အချို့) သည်သီးခြားထုတ်ကုန်လိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ထပ်တိုး ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒေါ်လာ ၂၀၀ အတွက် (ဒေါ်လာ ၁၀၀“ အဆင့်မြှင့်” ပြန်အမ်းငွေပင်လျှင်) ကျွန်တော့်ဆော့ဗ်ဝဲထုတ်ကုန်သည်ပြissuesနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ချက်ချင်း ၆ လစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်တွင်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ LiveUpdate system မှမွမ်းမံမှုများ 200mb စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်၌ပင်…စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သူတို့တပ်ဆင်ထားသော software ၏အစိတ်အပိုင်းကိုသာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Symantec ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲ * အားလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်တစ်ပြိုင်တည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှသီးခြားထုတ်ကုန် ၇ ခုအတွက် LiveUpdate နမူနာ ၇ ခုမလိုအပ်ဘဲချက်ချင်းမွမ်းမံမပေးသနည်း။
ကျွန်ုပ်၏မူလ gripe သို့ပြန်သွားသည်။ အနည်းဆုံး ၁၂.၁ အသုံးပြုသူများကိုဘယ်တော့မှမ ၀ င်ပါက ၁၂.၀ (Vista တွင်အလုပ်မလုပ်သော) ဝယ်ယူရန်အဘယ်ကြောင့်အပိုငွေပေးသင့်သနည်း။